6 Cunto Oo Muhiim U Ah Caafimaadka Ilkaha Iyo Cirridka - Daryeel Magazine
6 Cunto Oo Muhiim U Ah Caafimaadka Ilkaha Iyo Cirridka
Inkasto xubin kasta oo katirsan jirka beni’aadamka ay muhiim tahay hadana wey sii kala daran yihiin ilkahana waxay kamid yihin xubnaha muhiimka u ah beni’aadamka waxana mararka qaarkood lasoo darsa xanuuno iyo jirooyin waxayna muujinayaan daraasado caafimaad oo lasoo saaray in jirooyinkaasi ay yihiin kuwa laxalin karo lagana hortagi karo. Hadaba daryeelmagazine.com ayaa halkan idin kugu soo gudbinaya lix cunto oo u wanaagsan caafiimaadka ilkaha.
Timirta: waxay ka joojisaa ilkaha in Suus galo waayo waxaa ku jirta Maadada Fluoride
Lawska: lawsku wuxuu hodan ku yahay maadooyin lama huraan u ah caafimaadka ilkaha sida macdanta Zinc, phosphorous, magnesium, potassium, zinc, iyo weliba midkaa ugu muhiimsan ee ah calcium.
Basasha: basasha gaar ahaan marka la cuno iyadoo ciiriin ah waxay dishaa bakteeriyada gasha cirridka iyo ilkaha. Basasha ciiriinka ah waxaa lagu cuni karaa khudaarta cagaaran (salad).
Tufaaxa: Cunista tufaaxa ayaa la xaqiijiyay inay ilkaha bini’aadamka cadeeyaan. Tufaaxa ayaa la leh biyo dareere ah oo macaan kuwaasoo nadiifiya darbiyada cirridka.
Liinta: liintu waxay qofka ka ilaalisaa in afku qalalo sidoo kale waxay cadaysaa ilkaha iyadoona la dagaalanta bakteeriyada.
Shaaha cagaaran: shaahaan wuxuu ilkaha ka ilaaliyaa Suuska waayo waxa ku jira Maadada la yidhaahdo Floride wuxuuna ilaaliyaa Cirridka wuxuuna la dagaalama Becteria da dhibta leh iyo weliba wuxuu la dagaalamaa urta neefsiga ee la karahsado
Caalamadaha Soo Bixidda Ilkaha Caruurta Iyo Daryeelka Ay U Baahan Yihiin Noocyo Cuntooyinka Ka Mid Ah Oo Ilkaha U Keeni Kara Midabka Jaallaha Sida Ilkaha Loogu Caddeeyo Dhuxusha 8 Cunto Oo Si Weyn U Caawiya Dhimista Miisaanka Iyo Kobcinta Caafimaadka